Kapet Laser Cutting Machine - Golden Laser
Kapet Laser Ịcha Machine
Ịdị No .: CJG-210300LD
Kapet laser ịcha bed nke na-abụghị kpara, polypropylene eriri, blended ákwà, leatherette na ndị ọzọ carpets ọnwụ. Ebu arụ ọrụ table na akpaaka nri. ngwa ngwa na-aga n'ihu ọnwụ. Servo moto ụgbọala. Elu arụmọrụ na ezi nhazi mmetụta. Nhọrọ smart nesting software nwere ike ime ngwa ngwa na ihe onwunwe na-azọpụta nesting na ndịna a ga-ebipụ. Dị iche iche na nnukwu format arụ ọrụ ebe nhọrọ.
• Open-ụdị imewe. Nhazi format 2100mm × 3000mm. Servo moto ụgbọala. Elu arụmọrụ na ezi nhazi mmetụta.
• Karịsịa adabara nnukwu format na-aga n'ihu akara osise nakwa dị ka ịcha nha na shapes nke dị iche iche kapet, ute na rugs.
• ebu na-arụ ọrụ table na akpaaka-nri ngwaọrụ (nhọrọ). Fast na-aga n'ihu ọnwụ nke kapeeti.
• The laser ọnwụ igwe nwere ike ime mmezi-ogologo nesting na zuru format ọnwụ na a otu ụkpụrụ bụ ogologo oge karịa ọnwụ format nke igwe.
• Nhọrọ smart nesting software nwere ike ime ngwa ngwa na ihe onwunwe na-azọpụta nesting na ndịna a ga-ebipụ.
• 5-anụ ọhịa LCD na ihuenyo CNC sistemụ na-akwado multiple data nnyefe mode na ike na-agba ọsọ na offline na online ụdịdị.
• Ịgbaso elu iyuzucha mmiri usoro gakọrịta laser isi na iyuzucha mmiri usoro, ezi mmiri mmetụta, na-azọpụta ike.
• Red ìhè n'ọnọdu ngwaọrụ egbochi ọnọdụ ndiiche nke ihe onwunwe ke nri usoro na ana achi achi elu nhazi àgwà.
• Ọrụ nwekwara ike ịhọrọ formats nke 1600mm × 3000mm (CJG-160300LD II), 4000mm x 3000mm (CJG-400300LD II), 2500mm × 3000mm (CJG-250300LD) arụ ọrụ na tebụl na ndị ọzọ ahaziri format nke na-arụ ọrụ table.
Gịnị bụ uru nke laser ọnwụ nke carpets?
High nkenke - ezi ọnwụ nke nkọwa
Clean okè ịkpụ n'ọnụ - dịghị fraying ma ọ bụ charring
High mgbanwe na ngwe - enweghị ngwá ọrụ nkwadebe ma ọ bụ ngwá ọrụ mgbanwe
Akara nke ịkpụ n'ọnụ mgbe ịcha sịntetik carpets
Ọ dịghị ngwá ọrụ wear - anọgide elu ọnwụ quality
More Uru banyere Laser Cutting nke Kapetị
Laser Ịcha Kapetị Samples
Golden laser - CO2 Laser Cutting Machine na Production
10 mita mmezi-ogologo laser ọnwụ igwe
CJG-210300LD Kapetị Laser Ịcha Machine ụzụ oke
laser ụdị CO2 DC iko laser 130W / 150W
CO2 RF metal laser 150W / 200W / 300W / 600W
Cutting ebe 2100 × 3000mm
arụ ọrụ table Ebu arụ ọrụ table
arụ ọrụ na-agba mgbanwe
n'ọnọdu ziri ezi ± 0.1mm
Motion usoro Anọghị n'ịntanetị mode servo moto akara usoro, 5 inch LCD ihuenyo
jụrụ usoro Ịnọgide okpomọkụ mmiri chiller
Ịnye ọkụ AC220V ± 5% 50Hz / 60Hz
format akwado Ai, BMP, PLT, DXF, DST wdg
Standard collocation 1 set of 550W n'elu iyuzucha mmiri igwe, 2 tent nke 3000W ala iyuzucha mmiri igwe, Obere ikuku Compressor
Nhọrọ collocation Auto-nri usoro, red ìhè n'ọnọdu
*** Cheta na: Dị ka ngwaahịa na-mgbe niile emelitere, biko kpọtụrụ anyị maka ọhụrụ nkọwa. ***
Arụ ọrụ ebe nwere ike ahaziri
Golden laser - Flatbed CO2 Laser Cutting Machine
2100mm × 4000mm (82.7 "× 157,4")
Na ọdabara Materials na Industry
Adabara na-abụghị kpara, polypropylene eriri, blended ákwà, leatherette na ndị ọzọ na kapet.
Adabara dị iche iche carpets ọnwụ.
<< GỤKWUO Samples banyere Laser Ịcha Kapetị
Mere Laser maka Kapetị Cutting?
Ịcha azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta kapet bụ ọzọ dị ukwuu CO2 laser ngwa. N'ọtụtụ ọnọdụ, sịntetik kapet na-ebipụ na obere ma ọ bụ ọ charring, na okpomọkụ N'ịbụ laser omume mechie n'ọnụ iji gbochie fraying. Ọtụtụ pụrụ iche kapet nrụnye na moto-azụ, ugbo elu, na ndị ọzọ na obere square-footage ngwa-erite uru site nkenke na mma nke na-enwe na kapet precut na a nnukwu-ebe flatbed laser ọnwụ usoro. Iji a CAD file of n'ala plan, na laser cutter pụrụ ịgbaso ndepụta nke mgbidi, ngwa, na cabinetry - ọbụna na-eme ka cutouts maka table support posts na oche-arịọnụ rails ka chọrọ.
The mbụ foto na-egosi a na ngalaba nke kapet na a support post cutout trepanned na center. The kapet emep uta eri na-gwakọtara site laser ọnwụ usoro, nke na-egbochi fraying - a na-enwekarị nsogbu mgbe kapet na-mechanically bee.
The abụọ foto na-egosi na cleanly bee ihu cutout ngalaba. The ngwakọta nke emep uta eri na a kapet igosipụta dịghị ihe ịrịba ama nke agbaze ma ọ bụ charring.
The kapet laser ọnwụ igwe he dị iche iche format na dị iche iche nha nke niile kapet ihe. Ya elu rụọ ọrụ nke ọma ma na elu arụmọrụ ga mma gị na mmepụta nke ukwu, azọpụta oge na-azọpụta na-eri.
Model Ee: CJG-2101100LD
Aircraft Kapetị Laser Ịcha Machine
Ịcha azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta kapet bụ ọzọ dị ukwuu CO2 laser ngwa. N'ọtụtụ ọnọdụ, sịntetik kapet na-ebipụ na obere ma ọ bụ ọ ...
Model Ee: QMZDJG-160100LD
Laser cutter maka Knitting Vamp, ntupu Fabric Sports Akpụkpọ ụkwụ Upper
Akpan aiming ngwa ngwa ma kpọmkwem n'ọnọdu na akpaka ọnwụ maka ntupu akwa, ala na-akpa vamp na-ebi akwụkwọ na-akpa ákwà akpụkpọ ụkwụ uppers. U ...